Indlela yokuvotela iklabishi ukuyenza ibe yinkimbinkimbi?
Iklabishi yeSauerkraut iyi-raznosol yendabuko, isidlo esiphundu nesinempilo, Yebo, uma isiphekiwe kahle, sisebenzise ngendlela evamile (okungukuthi, encane). Kuhle futhi, ngokuqinisekile, kungaba isifiso esihle, lelo iklabishi etafuleni lethu lalinomsindo futhi lihle.
Kungani i-sauerkraut iba yithambile futhi ayiqedi?
Ungabiza ngezizathu eziningi ezihlukene: hhayi izinhlobo, ngesikhathi esingalungile ukupheka, hhayi usawoti, njll. Nokho, kunezincomo ezijwayelekile, okulandela ukuthi yikuphi okuzofeza imiphumela oyifunayo.
Akuzona zonke izinhlobonhlobo zeklabishi ezimhlophe ezifanele ukunquma (imiphumela emihle etholakalayo ngezinhlobo eziphuthumayo kanye nezikhathi eziphambili).
Imfoloko kufanele ibe yinkimbinkimbi kulokhu okuthinta, iklabishi akufanele ibe neqhwa futhi iqhwa. Isisindo esiphezulu sinama-3-4 kg.
Indlela yokuvutshelwa iklabishi ukwenza kube okuhlwabusayo, okumhlophe nokucwilisa?
Usawoti sisebenzisa ezinkulu, uniodized.
I-tare kufanele ibe ingilazi, ifakwe ngaphandle kwe-chips noma kusuka epulasitiki yokudla. Ngaphambi komuncu omuncu, kungcono ukusula izitsha zokukhipha imishanguzo ngaphakathi ngaphakathi nge-vinegar wetafula bese uyomisa.
Akufanele ushukumise le iklabishi ngosawoti isikhathi eside bese uyisigubha esitsheni sokusebenza, ukuze ijusi eyabelwe ihlanganisa yonke into ngokuphelele.
Ukuze silondoloze izinto eziningi eziwusizo (amavithamini, njll), asiyikusiklaza iklabishi kakhulu kakhulu futhi ifanelekile, ngokujwayelekile, enkulu, ingcono igcinwe futhi iyasiza kakhulu. Inqubo yokuvutshelwa ingcono kakhulu ekamelweni lokushisa elingaba ngu-12-15 degrees.
Izitsha ezine-sauerkraut kufanele zigcinwe endaweni epholile (isibonelo, emiphongolweni noma eshalofini ku-loggia engilaziwe), kodwa hhayi emakhazeni. Uma iklabishi ikhululeka, iyoba yithambile futhi ifinyelele futhi ngokuqinisekile ngeke iqede.
Amagesi abumba ngesikhathi sokuqothula kumele akhululwe ngokukhululekile noma kufanele akhululwe ngezikhathi ezithile, ngakho nsuku zonke ngenduku yokhuni senza isigqoko (noma eziningana) phansi, lokhu kungukuthi u-solitaire emabhodleleni ama-3-litre, izimbiza ezinkulu noma iziqukathi ezinamabhodlela. Uma ungayinaki le nqubo, ukunambitheka kuyonakele, kuyoba ubuhlungu futhi iklabishi ingalahlekelwa isici sayo esiyinkimbinkimbi.
Nsuku zonke (noma okungenani njalo kwezinsuku ezimbili) udinga ukususa isikhumba esenziwe phezu kweklabishi.
I-crispy, i-sauerkraut esheshayo, esheshayo ku-recipe
izaqathe - 1 pc. i-plug 1;
usawoti, omkhulu, uniodified - 1 tbsp. isipuni ngo-1-2 kg;
ushukela - 1 tsp we-1-2 kg;
imbewu ka-cumin, i-fennel ne-coriander - ithispuni 1 nge-1-2 kg.
Iklabishi eqoshiwe ezinxenyeni (isibonelo, imfoloko engu-1) ixutshwe nama-izaqathe, izandla kancane, bese sifaka emigqeni yamanzi, pritrambovyvaya ngokuqinile (isandla noma ithusi lokutshala), ethela ingxube yasawoti, ushukela nembewu. Sigcwalisa imbiza ngokuqinile emahlombe.
Ekupheleni kwenqubo, i-brine, ehlanganisa ijusi eyimfihlo, kufanele ihlanganise yonke iklabishi embizeni. Njengoba ijusi lingadlulisa ngesikhathi sokuvutshelwa, faka imbiza epulangwe. Le ndlela yokushisa iklabishi ayidingi ukubeka ingcindezi.
Sigcina imbiza ekamelweni lokushisa noma okuncane kancane kwezinsuku ezingu-2-3 (emva kwalokho sekusele ukulungele ukusetshenziswa), ukuvumela ama-gas avele. Ngaphezu kwalokho kunengqondo ukubeka imbiza egumbini elibubuko.
Iklabishi elisondayo iyasiza kakhulu kuneklabishi elisha ngoba inevithamini C.
I-brine ephunga elimnandi iyilungiselelo elimangalisayo lensiza .
Iklabishi emanzini inengqondo ukuvuthwa ekubalweni okunjalo ukuthi idliwe ngesonto noma amabili kakhulu.
Lingonberry noshukela ebusika
Jamu kusuka kuma-oranges ne-peel
I-plum ye-plum ekhonjiwe ebusika - izindlela zokupheka ezinhle kakhulu
Solyanka ngamakhowe, neklabishi ebusika
I-saumar esiphundu i-caviar ebusika
Hlanganisa isiraphu ebusika ngaphandle kokuzala inzalo
IJarrot juice ebusika
Jamu kusuka kuma-apula nge-sinamoni
Ukubalwa kweminyaka yobudala
Isipinashi - sikhula
Indlela yokwandisa inani lomuthi?
Izigqoko ezenziwe ngemfashini - ama-models angama-45 amaningi kunazo zonke
Ukushaja okungenasici kwefoni
Dinan, Belgium - ezikhangayo
Izindawo zokuhlala e-Iceland
UGigi Hadid noZane Malik nge-Halloween bashintsha baba ngamaqhawe amazwi ama-Marvel
Amabhulukwe omama omdala
Izitshalo zokumboza phansi komhlaba we-aquarium
Izambatho eziphathekayo zamantombazane
Ukuvuvukala kwe-trachea - izimpawu, ukwelashwa
I-red matte lipstick
Ngimiphi iminyango yangaphakathi okufanele ngiyikhethe?